अब खुल्लमखुल्ला गाँजा कारोबार होला त ? (भिडियो रिपोर्ट) | Sagarmatha TV
राष्ट्रसंघले हटायो गाँजामाथिको प्रतिबन्ध, के अब नेपालमा खेती हुन्छ ?
काठमाडौं संयुक्त राष्ट्रसंघको लागूऔषधसम्बन्धी नियोगले गाँजा र गाँजाबाट बन्ने वस्तुलाई खतरनाक लागुपदार्थको सूचीबाट हटाएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिसपछि राष्ट्रसंघले गाँजालाई प्राणघातक लागूऔषधको सूचीबाट हटाउँदै औषधिजन्य प्रयोजन र उपचारमा प्रयोग गर्न सम्बन्धित देशहरुका लागि बाटो खुला गरेको छ ।
भियनामा सम्पन्न नियोगको वार्षिक सम्मेलनमा २७ देशले समर्थन जनाएका थिए भने २५ देश विपक्षमा थिए । सो प्रस्तावमा नेपाललगायत अमेरिका, बेलायत, दक्षिण अफ्रिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, फ्रान्स, इटाली, जर्मनी, भारतले पक्षमा मतदान गरे भने जापान, इराक, ब्राजिल, चीन, रूस, पाकिस्तानलगायतले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । मतदानमा युक्रेन उपस्थित थिएन ।
गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउन नेपालमा प्रतिनिधिसभा सदस्य विरोध खतिवडाले पहिलो पटक आवाज उठाएका थिए । राष्ट्रसंघले प्रतिबन्ध हटाएसंगै खतिवडाले यस कदमको खुलेर प्रसंसा गरेका छन् ।
यता राष्ट्रसंघीय लागुऔषधसम्बन्धी आयोगले सन् १९६१ महासन्धिको अनुसूची ४ मा रहेको गाँजालाई अनुसूचीमा १ मा छुट्टै राख्ने गरी संशोधन मात्र गरेको भन्दै गाँजालाई वैधानिकता प्राप्त नभएको तर्क गर्छन् लागुऔषधको बिषयमा जानकार पूर्वडीआइजी हेमन्त मल्ल ।
सन् १९६१ देखि खेती गर्न, ओसारप्रसार र सेवन गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको गाँजालाई करिब ५९ वर्षसम्म उपचारमा प्रयोग गर्नसमेत कडा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल अझैपनि गाँजा प्रतिबन्धित हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनका अनुसार गाँजाले स्वास्थ्य, समाज र आर्थिक पक्षमा समेत हानी पार्दछ ।
गाँजा प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने हेमन्त मल्लको तर्कसंग सहमत छैनन् सांसद खतिवडा । उनी नेपाली समाजमा पूर्खाैदेखि तरकारी, औषधि लगायतका महत्वपुर्ण काममा गाँजा प्रयोग हुदै आएकोले वैधानिक ढंगले खेती गरे किसानहरुको समेत आयआर्जन बढ्ने तर्क गर्छन् ।
कुनै समय नेपालमा गाँजाको बजार दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट मानिथ्यो । नेपालमा गाँजाको वैधानिक खपतताका हिप्पीहरु नेपाल आउने गर्दथे । यसैबीच अन्तर्राष्ट्रिय दबावकै कारण २०३३ सालमा लागुऔषध नियन्त्रण ऐन ल्याएर नेपाल सरकारले गाँजा प्रतिबन्ध लगायो । ऐन आएपछि नेपालमा गाँजाले विदेशी मुद्रा तान्न छोड्यो । तर यस पटक राष्ट्रसंघले प्रतिबन्ध फुकुवा गरेसंगै गाँजाको वैधानिकताबारे बहस फेरी चुलिएको छ ।